Canton Fair News | Midka
Bandhigga Shiinaha ee dhoofinta iyo dhoofinta ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Canton fair.Founded waxaa la guga ee 1957 waxaana lagu qabtaa guangzhou guga iyo deyrta ee sanad walba, Waa munaasabad ganacsi caalami ah oo dhameystiran oo leh taariikhda ugu dheer, heerka ugu sareeya, ta ugu weyn. qiyaasta, qaybaha badeecada ee ugu dhameystiran, tirada ugu badan ee kaqeybgalayaasha iyo saameynta ugu wanaagsan ee Shiinaha.
Tianjin TheOne Badeecadaha Birta Co., ltd waxaa ka soo qeybgalay 115th Canton Fair sanadkii 2013 markii ugu horeysay. Dhammaan xubnihii waxay tageen carwada.
Wixii markaas ka dambeeya, waxaan tagnaa Canton Fair sanadkii laba jeer waxaanan helnaa macaamiil badan xitaa amarada badan.
Laakiin bilowga sanadka 2020, cudurka faafa ee Corona Virus, wadanka oo dhan wuu xirnaa. Iyo bilowga Maarso, fayraska faafa ee dibedda. Sida aan ogsoonahay, Canton Fair wuxuu ahaa gacan qabasho bishii Abriil, markii aan la yaabanahay in carwadda la qaban doono sannadkan, Wasaaradda Ganacsiga ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha waxay ogaysiineysaa in carwada 127-aad ee Shiinaha laga keeno lana soo dhoofiyo (Canton fair) khadka tooska ah ee internetka 10 maalmood laga bilaabo 15-24th June.Holding the Canton fair online waa tallaabo hal abuur leh oo si firfircoon ula qabsanaysa saamaynta faafa ee '19' iyo xasilinta suuqa aasaasiga ah ee ganacsiga shisheeye iyo maalgashiga, kaas oo u horseedaya caawinta shirkadaha ganacsiga shisheeye inay amarrada helaan isla markaana ilaashadaan suuqa, oo ciyaaraan. doorka cadaaladdu sifiican ayuu u yahay madal loogu talagalay furitaanka adduunka oo dhan dhammaan xoogagga, hagaajinta heerka farsamada, adeegyada taageeraya, khibradda internetka ee tirada badan ee shirkadaha iyo ganacsatada, waxayna ku dadaalayaan inay qabtaan “xilli gaar ah, muhiimad gaar ah, tallaabooyin gaar ah, gaar ahaan cajiib” internetka Canton Fair.Weel ka soo gala shirkado gudaha ah iyo shisheeye iyo ganacsatada inay ka qaybqaataan.
Maalmahan, waxaan si firfircoon ugu diyaarineynaa Bandhigga Canton-ka tooska ah dhinac kasta. Iyada oo la adeegsanayo madal carwada tooska ah ee 'Canton' ee tooska ah, ha iibsado badan oo gudaha ah iyo kuwa caalamiga ahba ha na kulmaan, na ogaada, oo naga hel iskaashatada guuleysiga.
Markan Canton Fair Booth No. waa 16.3I32. Ku soo dhowow inaad booqato qolkeenna internetka.